Fumana ngaphandle kweintanethi, ungaxhunywanga, ubuncinci okwethutyana | Martech Zone
Fumana ngaphandle kweintanethi, ungaxhunywanga, ubuncinci okwexeshana
NgoLwesine, Aprili 15, 2010 NgoLwesibini, Aprili 1, 2014 USteve Kremer
Le ayisiyiyo ifoto yesitokhwe. Leyo yonyawo lwam kwi-hammock elunxwemeni eHonduras. Akukho seli, akukho laptop, akukho ngxaki mon.
Ndiqale ukungena kwi-Intanethi ndaza ndafumana idilesi yam ye-imeyile yokuqala ebutsheni bowe-1995 Ishishini loyilo lwewebhu. Ukuba nenkampani yam kwakuthetha ukuba kwi-Intanethi kwaye ndifumaneke kubathengi bam ngalo lonke ixesha. Ndandihlala ndixhumekile. Nditsho naseholideyini bendize nayo yam ngoku I-laptop ye-NEC yeediliya. Njengoko ixesha lihambile ndazibandakanya neziqalo ezahlukeneyo. Nangalapho xa ndandiseholideyini kwakulindelwe ukuba ndichithe ixesha lam elithile ndijonga ii-imeyile "ezingxamisekileyo" kwaye ndibiza iintlanganiso ezibalulekileyo. Kwaye ndenzile.
Kodwa kule veki iphelileyo ndithathe inqanawa yeCaribbean kwaye ndenza into ebendingazange ndiyenze kwiminyaka eyi-15. Ndemka ngokupheleleyo kwigridi. Akukho imeyile. Akukho fowuni. Ngeentsuku ezisi-7 kunye neeyure ezili-10. Kwakumangalisa ekuqaleni. Kodwa iyonke yayilungile, yayikhulula. Kwicala lobungcali bendinoncedo oluvela kwabo ndisebenza nabo abagubungela nayiphi na imicimbi engxamisekileyo ethe yavela. Ngaphambili kobuntu bendidla ngokufumana i-iPhone engekho epokothweni yam ukuze ndifumane ulwazi olukhawulezileyo lwe-Intanethi endicinga ukuba ndiyalifuna. Itekhnoloji yam yokuhambisa ubuchwephesha yayingekho kwaye emva kwethutyana ndaye ndayiqhela. Kwangoko kule veki bendithetha nomnxibelelanisi weshishini kwaye ndikhankanye iholide yam engafunekiyo. Uthe ngamanye amaxesha une “detox” ngeempelaveki apho angakhangeliyo “crackberry” yakhe kwaphela. Uthe yayintle kwaye ndiyavuma. Yizame..ukhuphe isixhobo..ukunyusa idetox..yonwabele intwasahlobo.
USteve uzichaza "njengelizwe elincinci, ilitye elincinci" njengobugcisa kunye nomthengisi. Washiya i-WISH-TV ngo-1995 ukuba abe ngomnye wabayili bokuqala kunye nabacebisi be-Indy. Endleleni wayesebenzela ukuqala kubandakanya iProperty.com, uNarrowline, i-OneCall Intanethi, Vontoo kwaye ChaCha uphi umqeshwa # 4 kwaye okwangoku nguMlawuli weChaCha wentengiso ye-Intanethi.
Xa uhambisa iSiza esitsha: Linganisa kabini, Sika kube kanye
Epreli 15, 2010 ngo-8: 05 PM
Ndiyakuvuyela ngeholide. Ndicinga ukuba ngamanye amaxesha singcwatywa nzulu kwiingxaki esisebenza kuzo kangangokuba singabuyeli mva. Ngamanye amaxesha umbono xa ukude wenza izinto zibonakale zicace gca! Ifoto entle!
Epreli 17, 2010 ngo-10: 07 AM
Ndikonwabele ukufunda le post. Ndivakalelwa kukuba ulonwabele iholide yakho. Kude kude nekhompyuter, kude nazo zonke iingxaki. Ndinqwenela njani ukuba ndikhe ndibenekhefu lam kungekudala. Okwangoku, kusafuneka ndigqibe omnye umsebenzi.
Ifoto entle ngokwenene!